عاموس 3 NAV - Amos 3 ASCB
Wɔfrɛ Adansefoɔ Tia Israel
1Montie saa asɛm a Awurade aka atia mo yi, Ao, Israelfoɔ, deɛ ɛtia abusua a meyii wɔn firii Misraim no nyinaa:
2“Mo nko ara na mayi mo
wɔ mmusua a ɛwɔ asase so nyinaa mu;
enti mɛtwe mo aso
wɔ mo bɔne nyinaa ho.”
3Nnipa baanu bɛtumi abom anante,
wɔ ɛberɛ a wɔnyɛɛ anokorɔ anaa?
4Gyata bobom wɔ dɔtɔ ase
wɔ ɛberɛ a ɔnhunuu ahaboa biara anaa?
Ɔpɔ so wɔ ne buo mu
wɔ ɛberɛ a ɔnkyeree ahaboa biara anaa?
5Anomaa bɛtɔ afidie mu wɔ fam
wɔ baabi a wɔnnsum afidie anaa?
Afidie hwan wɔ
ɛberɛ a ɛnyii aboa anaa?
6Sɛ wɔhyɛn totorobɛnto wɔ kuropɔn mu a
nnipa no ho mpopo anaa?
Sɛ atoyerɛnkyɛm ba kuropɔn bi mu a
ɛnyɛ Awurade na ɔyɛeɛ anaa?
7Ampa ara, Otumfoɔ Awurade nnyɛ biribi
a ɔnna ne nhyehyeɛ adi
nkyerɛ nʼAsomafoɔ adiyifoɔ no.
8Gyata no abobom,
hwan na ɔnnsuro?
Otumfoɔ Awurade akasa,
hwan na ɔrenhyɛ ho nkɔm?
9Mompae mu nka nkyerɛ Asdod aban
ne Misraim aban:
“Mommoaboa mo ho ano wɔ Samaria mmepɔ so;
hwɛ basabasayɛ a ɛwɔ ne so
ne nhyɛsoɔ a ɛwɔ ne nkurɔfoɔ mu.”
10“Wɔnnim sɛdeɛ wɔyɛ deɛ ɛyɛ,”
Wɔde nneɛma a wɔafo ne deɛ wɔawia
sie wɔ wɔn aban mu.
11Ɛno enti, yei ne deɛ Otumfoɔ Awurade seɛ,
“Ɔtamfoɔ bi bɛtwi afa asase no so;
Ɔbɛbubu wʼabanbɔeɛ agu,
na wafo wʼaban.”
“Sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ gye
nnyawa mmienu nnompe anaa aso sin
firi gyata anom no,
saa ara na wɔbɛgye Israelfoɔ nkwa,
wɔn a wɔtete wɔn mpa twea so wɔ Samaria,
ne wɔn a wɔdeda nkonwa pa mu wɔ Damasko.”
13“Tie yei, na di adanseɛ tia Yakob efie,” sɛdeɛ Awurade, Asafo Awurade Onyankopɔn seɛ nie.
14“Ɛda a mɛtwe Israel aso wɔ ne nnebɔne ho no,
mɛsɛe afɔrebukyia a ɛwɔ Bet-El;
wɔbɛtwitwa afɔrebukyia no mmɛn
na abu ahwe fam.
15Mɛdwiri awɔberɛ efie
ne ahuhuro berɛ efie agu;
na afie a wɔde asonse adura ho no wɔbɛsɛe no
na afie akɛseɛ no nso wɔbɛbubu agu,”
ASCB : Amos 3